Rosia · Septambra, 2018 · Global Voices teny Malagasy
Rosia · Septambra, 2018
Tantara mikasika ny Rosia tamin'ny Septambra, 2018
Fankalazana ny Ashura manerantany
Arabia Saodita 28 Septambra 2018
Muharram, volana voalohany amin'ny alimanaka Islamika, no fotoam-pisaonana ho an'ireo Silamo Shiita. Mandritra izany volana izany, mankalaza ny fahafatesan'i Husain, zafikelin'ny Mpaminany Mohammed sy ny Imam shiita fahatelo, ao amin'ny Ady tao Karbala izy ireo. Tonga amin'ny fara-tampon'ny Ashura, andro fahafolo amin'ny volana ny lanonana fisaonana.
Rosia: Fiovaovan'ny fanoherana
Fahalalahàna miteny 27 Septambra 2018
Raha jerena ny fifandraisana eo amin'ireo mpandray anjara [mpitandro filaminana marobe kokoa noho ny mpanao fihetsiketsehana], tahaka ny hoe polisy ny ankamaroan'ireo mpanohitra, ary nanakana azy ireo fotsiny tsy haneho ny fanoherany ny mponina ao an-toerana. [...]
Rosia : Nampiharina amin’ny olana an-drenivohitra ny fanentanana an-tserasera
Mediam-bahoaka 27 Septambra 2018
Matetika manome vahaolana amin'ny olana eo an-toerana izay atrehin'ny mponina miaina an-tanàndehibe sy any amin'ny foiben-drenivohitra.isam-paritra ny tetikasa an-tserasera ahafahan'ny olom-pirenena mandray anjara. Manome fahafahana ny olom-pirenena mba hilaza ny olana izay tsikariny ny sehatra Rosiana miisa roa ka mba handraisan'izy ireo anjara amin'ny famahana izany.
Zeorzia: Kandidà Amin'ny Eurovision Miaraka Amin'ny “Tsy Mila Put In Izahay”
Zeorzia 24 Septambra 2018
Tohin'ny ady izay nifanaovany vao haingana tamin'i Rosia, nanambana ny hanao ankivy ny fifaninanana hira Eurovision, nokarakaraina tao Maosko aloha i Zeorzia tamin'ity taona ity, avy eo izy niova hevitra (amin'ny teny anglisy ireo rohy manaraka). Kanefa, raha toa io fiovàna io tany am-piandohana ka toy ny andrana handaminana ireo fifandraisana ratsy endrika, ny nifanohitra tamin'izay no nitranga omaly nandritra ny fifanintsanana tao amin'ny firenena..
Okraina: Fanamarihan'i Marat Gelman
Okraina 13 Septambra 2018
Mba hiomanana amin'ny fitsidihany taorian'ny fifidianana tao Kyiv tamin'ny herinandro lasa teo, nijery ny Ukrayinska Pravda, loharanom-baovao antserasera malaza momba ny vaovao ara-politika, niara-naorin'i Georgiy Gongadze tamin'ny taona 2000 i Marat Gelman, mpisera LJ galerist, Rosiana mpandraharahana ara-javakanto, ary voalaza fa "mpanolo-tsaina miafina"an'i Victor Yanukovych.
Nanaiky ny fangatahan'ny Rosiana ny Google dia nanasivana lahatsary fanentanana fihetsiketsehana
Fahalalahàna miteny 09 Septambra 2018
Mbola tsy tapitra ity raharaham-panafintohinana farany indrindra ity noho ny fahitana ny Google ho ao anatin'ny krizim-pisiana, mitroatra amin'izay hitany ny mpiasa ao aminy noho ny fidiran'ny orinasany mankany amin'ny sivana.
Ahoana ny fomba nitehirizan'ny nasionalisma ny vakoka kristiana ôrthôdôksa tamin'ny vanim-potoana URSS
Belarosia 02 Septambra 2018
Nandritra ny vanim-potoana URSS, nilaina hanairana ny fitiavan-tanindrazan'ny mponina ihany koa ny vakoka kristiana ortodoksa
Rosia: Anarana mitovy
Hehy 01 Septambra 2018
Raha niala tamin'ny tantara an-tsehatra sy ny vazivazy ara-politika Okrainiana, ity misy tantara mampihomehy ihany momba ny anarana mitovy, navoakan'ilay Tsetsenina mpanao gazety Timur Aliev